Kodzero-dzevanhu, 07 Ndira 2021
China 7 Ndira 2021
Ndira 07, 2021
Vananyamukuta Voramwa Mabasa Vachiti Havana Zvikwanisiro
Vananyamukuta vepachipatara cheSally Mugabe icho chaimbonzi Harare Central Hospital vaswera vachiramba kupinda muchipatara kuti vabatsire madzimai akazvitakura vachiti havana mbatya dzekuzvidzivirira kuchirwere cheCovid 19.
Chirwere cheCovid-19 Chotemesa Nyika Musoro Kusanganisira Vagere kuMaruwa
Matunhu aya anoti Mashonaland West, Mashonaland Central, Mashonaland East, Manicaland, Midlands, Masvingo, Matabeleland North neMatabeleland South ave nevanhu zviuru zvesere nezana nemakumi masere vabatwa nechirwere ichi, kana kuti 8, 180.
Nyaya yeKuti Vanhu Vagare Mudzimba Younza Mutauro muNyika
Kunyangwe vanhu vakawanda vari kutenderana kuti chirwere cheCovid-19 chapararira zvinotyisa munyika, nyaya yekuti zvogadziriswa sei iri kuunza kusabatana zvikuru danho rehurumende rekuti vakawanda vagare mudzimba kwemazuva makumi matatu.
Vatsigiri va VaTrump Vanoita Mhirizhonga paCapitol Hill
Mhomho yevatsigiri vaVaTrump yakapunza mahwindo nemisuwo izvo zvakakonzera kuti nhengo dzose dzeparamende dzitize kana kuvanda kusvika mapurisa asvika.
Ndira 06, 2021
Vanhu Voyaura Vari paBeitbridge Border Post
Vanhu vakawanda vari kuda kudzokera kuSouth Africa vataura neStudio 7 paBeitbridge Border Post vati vave nemazuva matatu kana kupfuura vakamiswa pabhodha reBeitbridge nekuda kwedambudziko rekunonoka kudhindirwa magwaro ekufambisa izvo vati zvave kukonzera matambudziko akasiyana siyana.
Kanzuru yeHarare Yokurudzira Kutevedzwa kweMitemo Yakatarwa neHurumende
Vakafanobata chigaro chemeya weHarare, VaStewart Mutizwa, vati zviri pachena kuti guta reHarare ndiro ranyanyovhiringwa nechirwere ichi, nekudaro vanhu ngavagare mudzimba sezvakataurwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi.
DJ Fantan, Levels naDhama Vopika Mujeri kweMwedzi Mitanhatu
Mutongi wedare, Amai Vongai Muchuchuti Guwuriro, vati vatatu ava vagare mujeri kwemwedzi mitanhatu mushure mekusendeka parutivi mimwe mwedzi mitanhatu.
Matare eDzimhosva Ovhiringwa neCovid-19
Mutauriri weJudicial Services Commission, Muzvare Rumbidzai Takawira, vati kunyange hazvo matare anenge akavhurwa panguva iyi, haakwanisi kuita mabasa awo sezvinotarisirwa nekuda kwechirwere cheCovid-19 nezvimwe zvipingaidzo.
Nyika Inovharwa kweMazuva Makumi Matatu Ichirwisa Covid-19
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vashora hurumende vachiti maitiro ayakaita lockdown anoomesera veruzhinji.
Nyanzvi Dzoyambira Kuvhiringidzika Kwakanyanya kweHupfumi neNyaya yeKuti Vanhu Vagare Mudzimba
Nyaya yekumbovharwa kwemakambani akawanda uye kuti vanhu vagare mudzimba kuyedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus chakomba munyika iri kunzi nenyanzvi munyaya dzezvehupfumi ichapa kuti hupfumi hwenyika hutoramba hwakananga kumawere.
Hurumende Yoramba Kuti VaMafume Vaburitswe Mujeri
Hurumende neMuvhuro yakasvitsa chikumbiro kudare ramejasitiriti chekuti dare ripe mutongo wekuti meya weHarare vakambomiswa basa VaJacob Mafume, avo vari kupomerwa mhosva yekuita huori mukanzuru yeHarare vasabvumidzwe kubuda mujeri kusvika mhosva yavo yatongwa.